Cycloastragenol (CAG) sidoo kale loo yaqaan T-65 waa tetracyclic triterpenoid dabiici ah oo laga helo Astaamaha Astragalus dhir. Waxaa markii ugu horaysay la ogaaday goorta Astaamaha Astragalus soosaaray waxaa lagu qiimeynayay maaddooyinka firfircoon ee leh anti-gabowga guryaha.
Cycloastragenol sidoo kale waxaa laga soo qaadan karaa Astragaloside IV iyada oo loo marayo tallaabada hydrolysis. Astragaloside IV waa maaddada ugu weyn ee firfircoon Astaamaha Astragalus geedo yaryar. In kasta oo Cycloastragenol iyo Astragaloside IV ay iskumid yihiin qaab dhismeedka kiimikada, cycloastragenol ayaa ka fudud culeyska maadada marka loo eego Astragaloside IV. Sidaa awgeed, Cycloastragenol waa mid waxtar badan sababtoo ah bioavailability sare iyo sidaas awgeed dheef-shiid kiimikaad sare ee cycloastragenol. Dheef-shiid kiimikaadka sarreeya ee cycloastragenol waxaa lagu xusay epithelial-ka mindhicirka iyada oo loo marayo faafitaanka dadban.
Dhirta astragalus waxaa loo isticmaali jiray dawo dhaqameedka Shiinaha qarniyo badan sidoo kale maanta waa la isticmaalaa. Warshadda 'Astragalus' waxaa loo isticmaalay saameynteeda faa'iido leh oo ay ka mid yihiin bakteeriyada ka hortagga, anti-bararka iyo sidoo kale awoodda kor u qaadista difaaca jirka.
CAG waxaa lagu muujiyey inay tahay xarun kahortagga gabowga oo kobcisa waxqabadka enzyme telomerase iyo bogsashada nabarrada. Hadda waa xarunta ugu weyn ee loo yaqaan inay kiciso telomerase-ka bini-aadamka, sidaas awgeedna waa kaabis weyn oo rajo leh oo loogu talagalay horumarin dheeraad ah.
Cycloastragenol waxaa loo aqoonsaday inuu yahay dhaqaajiye telomerase, oo door ka ciyaara kordhinta dhererka telomeres. Telomeres waa koofiyado ilaalin ah oo ka kooban Nucleotide soo noqnoqoshada dhamaadka koromosoomka. Telomeres-kan ayaa noqda kuwa gaagaaban kadib qeyb kasta oo unug taas oo keenta daciifnimo iyo hoos u dhac ku yimaada unugyada. Dheeraad ah, telomeres sidoo kale waxaa lagu soo gaabin karaa diiqadda oksida.
Yaraynta xad dhaafka ah ee telomeres waxay la xiriirtaa gabow, geeri iyo qaar ka mid ah xanuunnada la xiriira ag. Nasiib wanaagse, enzyme telomerase wuxuu awoodaa inuu kordhiyo dhererka telomeres-kan.
In kasta oo aysan jirin daraasad ballaaran oo lagu caddeeyo awoodda cycloastragenol si loo dheereeyo nolosha, haddana waa rajo ka-hortagga gabowga. Waxaa la cadeeyay in laga takhaluso calaamadaha gabowga oo ay kujiraan khadadka ganaaxa iyo laalaabku. CAG sidoo kale way yareyn kartaa halista ah inuu ku dhaco xanuunada xumaada sida cudurka Parkinson, Alzheimer's, iyo araga indhaha.
In kasta oo ay badan yihiin faa'iidooyinka caafimaadka ee cycloastragenol, waxaa jira walaac laga qabo inuu u horseedo kansar ama soo dedejiyo kansarka. Si kastaba ha noqotee, daraasadaha qaarkood ee lagu sameeyay maadooyinka xayawaanka waxay soo sheegaan faa'iidooyinka cycloastragenol iyada oo aan wax cudur ah ku dhicin kansarka.
Budada Cycloastragenol ee iibka ah ayaa si fudud looga heli karaa khadka tooska ah waxaana laga iibsan karaa bixiyeyaasha badan ee caanka ah ee loo yaqaan 'cycloastragenol'.
In kasta oo, faa'iidooyinka caafimaad ee badan ee loo yaqaan 'cycloastragenol' la tilmaamay, weli waa xubin cusub oo daraasad ku socota. Intaas waxaa sii dheer, waxyeelooyinka cycloastragenol ma ahan kuwo aad u cad, sidaa darteed waa in loo adeegsadaa taxaddar.
Cycloastragenol waa isku-darka saponin triterpenoid oo ka soo jeeda xididka dhirta Astragalus. Astaamaha Astragalus warshad waxaa loo isticmaali jiray dawada dhaqameed ee Shiinaha (TCM) in kabadan 2000 oo sano walina waxaa loo isticmaalaa isku diyaarinta dhirta.
Dhirta astragalus waxaa lagu yaqaanay awooddeeda hagaajinta difaaca jirka, ilaalinta nolosha, u shaqeyso sida duray iyo waliba lahaansho caafimaad kale guryaha sida xasaasiyadda ka hortagga, bakteeriyada, anti-gabowga iyo faa'iidooyinka ka-hortagga cadaadiska.
Cycloastragenol oo badanaa loo yaqaan TA-65 laakiin sidoo kale waxaa loo yaqaan Cyclogalagenin, Cyclogalegenin, Cyclogalegigenin, iyo Astramembrangenin. Cycloastragenol dhamaystirid waxaa badanaa loo yaqaan wakiilka gabowga, si kastaba ha noqotee, faa'iidooyinka kale ee caafimaadka cycloastragenol waxaa ka mid ah xoojinta nidaamka difaaca jirka, astaamaha anti-bararka iyo anti-oksidheer.
Cycloastragenol iyo Astragaloside IV
Labada cycloastragenol iyo Astragaloside IV labaduba waxay si dabiici ah ugu dhacaan soosaarka dhirta astragalus. Astragaloside IV waa maaddada asaasiga ah ee firfircoon astragalus membranaceus, si kastaba ha noqotee, waxay ku dhacdaa tiro yar oo xidid ah. Nidaamka soo saarista saponins-kan, cycloastragenol iyo astragaloside IV, badanaa wey adagtahay sababo la xiriira heerka sare ee isdaahirinta loo baahan yahay.
Iyadoo labadaba cycloastragenol iyo astragaloside IV waxaa laga soo qaatay dhirta astragalus, cycloastragenol sidoo kale waxaa laga heli karaa astragaloside IV iyada oo loo marayo habka hydrolysis.
Labadan urur waxay leeyihiin qaab kiimiko isku mid ah, si kastaba ha noqotee, cycloastragenol wuu ka fududyahay culeyska molikiyuulka marka loo eego astragaloside IV sidoo kale waa la heli karaa.
Mashruuca Waxqabadka ee Cycloastragenol
i. Kicinta telomerase
Telomeres waa Nucleotide ku soo noqnoqda dhamaadka koromosoomyada toosan waxaana ku xidhan noocyo borotiinno ah. Telomeres si dabiici ah ayey u gaabintaa qayb kasta oo unug ah. Telomerase, ribonucleoprotein complex oo ka kooban enzymes transcriptase translatease catalytic (TERT) iyo telomerase RNA qayb (TERC) waxay dheereysaa telomeres. Tan iyo doorka muhiimka ah ee telomeres waa inuu ka ilaaliyo koromosoomyada isku darka iyo nabaad-guurka, unugyada badanaa waxay u aqoonsadaan telomeres aad u gaaban inay yihiin DNA dhaawacan.
Natiijooyinka firfircoonaanta telomerase ee loo yaqaan 'Cycloastragenol telomerase' ayaa keenaya kordhinta telomeres taas oo iyaduna soo bandhigeysa saameyn faa'iido leh.
ii. Waxay kobcisaa dheef-shiid kiimikaadka
Lipids waxay si dabiici ah ugu shaqaysaa sidii bakhaar tamar u ah jirkeena. Si kastaba ha noqotee, inbadan oo ka mid ah dufankaasi waxay dhaawici karaan caafimaadkeena.
Cycloastragenol waxay dhiirrigelisaa dheef-shiid kiimikaad caafimaad qaba iyada oo loo marayo biomarkers-yada kala duwan.
Marka hore, qadar yar, CAG waxay yareyneysaa dhibcaha dareeraha liptop-ka ee 3T3-L1 adipocytes. Marka labaad, markii loo isticmaalo qiyaaso badan, CAG waxay horjoogsataa kala-duwanaanta 3T3-L1 preadipocytes. Ugu dambeyntiina, CAG wuxuu kicin karaa qulqulka kalsiyum ee 3T3-L1 preadipocytes.
Maaddaama kalsiyum-ka jirka ku jira ee sarreeya uu xakamayn karo kala-duwanaanta adipocytes, CAG wuxuu keenaa isku dheelitirnaanta dheef-shiid kiimikaad iyadoo kicineysa qulqulka kalsiyum.
iii. Waxqabadka antioxidant
Cadaadiska Oxidative waa sababta asalka u ah cuduro badan iyo sidoo kale senescence cell. Cadaadiska Oxidative wuxuu dhacaa marka jirka ay ku badato xag-jiryada xagjirka ah.
Cycloastragenol waxay soo bandhigtaa astaamaha anti-oksidheer iyadoo kor looqaadayo awoodda antioxidant-ka. Waxqabadka antioxidant wuxuu la xiriiraa kooxda hydroxyl ee laga helo CAG.
Intaa waxaa sii dheer, diiqadda oksidheer waa sababta ugu weyn ee gaabinta telomere, sidaas awgeed ilaalinta CAG telomere waxaa laga soo qaatay waxqabadka antioxidant iyo firfircoonida telomerase labadaba.
iv. Waxqabadka anti-bararka
In kasta oo caabuqu yahay hab dabiici ah oo jidhku ula dagaallamo infekshin ama dhaawac, caabuq daba dheeraada ayaa waxyeello leh. Caabuq dabadheeraad ah wuxuu la xiriiraa cuduro badan sida oof wareenka, kaadi macaanka, xanuunada wadnaha iyo xididada.
Budada Cycloastragenol waxay soo bandhigtaa astaamaha anti-bararka. Faa'iidooyinka anti-bararka ee cycloastragenol waa iyada oo loo marayo siyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin ka hortagga faafitaanka lymphocytes iyo hagaajinta fosforyaalka loo yaqaan 'AMP-activated protein kinase (AMPK).
i.Cycloastragenol iyo habka difaaca jirka
Cycloastragenol wuxuu gacan ka geysan karaa hagaajinta difaaca jirka iyadoo la xoojinayo badashada T lymphocyte. Awoodda cycloastragenol dheeri si ay u shaqeyso telomerase waxay awood u siineysaa inay dhiirrigeliso hagaajinta DNA iyadoo horseedeysa koritaanka iyo dhererka telomere
ii.Cycloastragenol iyo Anti-gabowga
Cycloastragenol gabowga guryaha ayaa ah danta ugu weyn ee cilmi baarista maanta. CAG waxaa la tilmaamay inay dib u dhigto gabowga bini aadamka sidoo kalena ay yareyso astaamaha gabowga sida duuduubnaanta iyo khadadka ganaaxa. Waxqabadka anti-gabowga ee loo yaqaan 'Cycloastragenol' waxaa lagu gaaraa afar habab oo kala duwan. Hababka looga hortago gabowga ee loo yaqaan cycloastragenol waxaa ka mid ah;
La dagaallanka diiqadda oksida
Cadaadiska Oxidative wuxuu u dhacaa si dabiici ah marka ay jirto isku dheelitir la'aan u dhaxeysa xagjirnimada bilaashka ah iyo antioxidant ee jirka. Haddii aan la xakameynin, cadaadiska oksidheer wuxuu dardargelin karaa geeddi-socodka gabowga sidoo kale wuxuu horseedi karaa xaalado daba-dheeraada sida kansarka, cilladda wadnaha iyo sonkorowga.
Soosaarida Cycloastragenol astragalus waa shey antioxidant aad u fiican sidoo kale wuxuu hagaajiyaa awooda antioxidant-ka dabiiciga ah ee jira. Tani waxay kaa caawineysaa daahitaanka gabowga iyo sidoo kale ka hortagga dhacdooyinka jirrooyinka la xiriira da'da.
Cycloastragenol wuxuu u shaqeeyaa sida firfircooneyaha telomerase
Sida looga hadlay qaybta kore ee ku saabsan habka ficilka, cycloastragenol waxay caawisaa in la dheereeyo telomeres. Tani waxay door muhiim ah ka ciyaartaa hubinta sii socoshada kala-jabka unugyada taasoo dib u dhigeysa gabowga. Tani waxay sidoo kale gacan ka geysaneysaa sidii loo ilaalin lahaa xubnaha jirka oo si sax ah u shaqeynaya.
Cycloastragenol waxay ka difaacdaa falaadhaha UV
Markuu qofku u soo baxo iftiinka qoraxda waqti dheeri ah unugyada jidhku way waxyeeloobi karaan taasna waxay keentaa inay si fiican u shaqeeyaan. Tani waxay u keentaa qaab ah gabow dhicis ah oo loo yaqaan sawir-gabow.
Budada Cycloastragenol waxay u timaaddaa samatabbixin maadaama loo muujiyey inay ka ilaalinayso maqaarka waxyeelada waxyeelada leh ee shucaaca UV.
Cycloastragenol wuxuu joojiyaa glycation-ka borotiinka
Glycation waa geedi socod ay sonkorta sida gulukooska ama fructose ay ku dhejiso lipid ama borotiin. Glycation waa mid ka mid ah biomarkers-ka sonkorowga waxaana lala xiriiriyay gabowga iyo sidoo kale cilado kale.
Kordhinta Cycloastragenol waxay ka caawisaa kahortagga gabowga glycation iyadoo la joojinayo sameynta alaabada glycation.
iii.Faa'iidooyinka Kale ee Caafimaadka ee Cycloastragenol:
Daaweynta kansarka Cycloastragenol
Awoodda daaweynta kansarka 'cycloastragenol cancer' waxaa lagu muujiyaa awoodda ay u leedahay inay baabi'iso unugyada kansarka leh, hagaajiso difaaca jirka iyo sidoo kale inay qofka ka ilaaliso falcelinta waxyeellada leh ee kiimoteraabiga.
Daraasad lagu sameeyay dadka qaba kansarka naasaha, kansarka cycloastragenol daaweynta waxaa lagu muujiyey awooddeeda si loo yareeyo dhimashada qiyaastii 40%.
Waxay ka ilaalin kartaa wadnaha waxyeelo
Cycloastragenol ayaa laga yaabaa inay difaac ka bixiso cilladda wadnaha.
Daraasad ku saabsan jiirka oo leh dhaawac wadnaha ah, kaabista cycloastragenol ayaa lagu ogaadey inay wanaajineyso cilladda wadnaha iyada oo kor u qaadeysa autophagy ee unugyada myocardial iyo sidoo kale xakamaynta muujinta matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) iyo MMP-9.
Iyada oo ku saleysan dib u eegista cycloastragenol, way kari kartaa hagaajinta tayada hurdada. Si kastaba ha noqotee, daraasadaha daaweynta ayaa looga baahan doonaa inay bixiyaan caddayn adag oo ku saabsan awoodda ay u leedahay inay kor u qaado hurdada.
Waxay kaa caawin kartaa la dagaalanka niyadjabka
Telomere gaagaaban ayaa laga helay dadka qaba xanuunka murugada sida arrimaha niyadda iyo cudurada sida Alzheimers.
Daraasad ku saabsan jiirka ku jira tijaabada dabaasha qasabka ah, cycloastragenol dheeri ah oo la maamuley 7 maalmood ayaa lagu ogaadey inay yareyneyso dhaqdhaqaaqooda. Waxaa loo soo bandhigay in lagu kiciyo telomerase-ka neerfaha iyo sidoo kale unugyada PC1, taas oo sharraxaysa awooddeeda niyad-jabka.
Waxay dardar gelin kartaa bogsashada nabarrada
Bogsashada nabarrada ayaa ah arrin weyn oo ku saabsan bukaanka sonkorowga qaba. Nidaamkan bogsashada nabarrada wuxuu ku dhacaa hawlo taxane ah. Hawlahaasi waa; dhaqdhaqaaqa caabuqa, xinjirowga, dib u soo celinta epithelium, dib u dhiska iyo ugu dambeyn nidaaminta unugyada asliga ah. Unugyadan taranka epithelial waxay muhiim u yihiin bogsiinta nabarka sokorowga.
Waxaa la muujiyey in nabaad-guurka telomere uu si xun u saameynayo bogsashada dhaawaca. Halkani meesha budada cycloastragenol ay u timaado hagaajinta telomere gaagaaban iyo sidoo kale kor u qaadista faafitaanka iyo dhaqdhaqaaqa unugyada asliga ah. Tanina waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta nabarka degdegga ah.
Hagaajinta caafimaadka timaha
Dib-u-eegista Cycloastragenol ee dadka isticmaala shakhsi ahaaneed waxay muujinayaan in cycloastragenol laga yaabo inay gacan ka geysato kahortagga timo luminta, kor u qaadida timaha iyo kobcinta midabka timaha.
Faa'iidooyinka laga soosaaray daawada 'cycloastragenol astragalus' ka badan ayaa ah;
Waxay bixisaa waxqabad ka hortagga fayraska ah oo ka dhan ah unugyada CD4 + unugyada.
Waxay hagaajisaa caafimaadka maqaarka.
Wuu hagaajin karaa aragtida.
Qiyaasta Heerka ee Cycloastragenol
Heerka qiyaasta cycloastragenol waa qiyaastii 10 mg maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, maadaama tani ay tahay mid cusub dhamaystirid qaadashadiisu waxay inta badan ku xirnaan doontaa isticmaalka, da'da iyo xaaladaha caafimaad ee salka ku haya.
Qiyaasta 'cycloastragenol' qiyaasta waa in lagu kordhiyaa dadka waayeelka ah ee ka weyn 60 sano si loo gaaro dheecaan telomere ku filan iyo sidoo kale gaabinta habka gabowga.
Cycloastragenol ma nabad qabaa?
Budada Cycloastragenol guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid aamin ah heerarka qiyaasta qaarkood. Si kastaba ha noqotee, maadaama ay tahay mid cusub dhamaystirid waxyeelada cycloastragenol ee suurtagalka ah weli lama oga.
Faallooyinka yar ee cycloastragenol ee ku saabsan faa'iidooyinka la sheegay ee cycloastragenol ma ahan kuwo la isku halleyn karo oo ku filan in loo dammaanad qaado adeegsiga caqliga leh.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira walaac ah in cycloastragenol dheeri ay dardar-gelin karto kansarka iyada oo kor u qaadeysa koritaanka burooyinka. Tani waa fikrad aragtiyeed oo ku saleysan xaqiiqda ah in habka ugu weyn ee cycloastragenol ee ficilku yahay iyada oo loo marayo dheereynta telomere. Waxaa markaa loo maleynayaa inay wanaajineyso koritaanka unugyada kansarka.
Sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad iska ilaaliso inaad siiso cycloastragenol bukaanada kansarka ilaa xog sugan oo laga heli karo la xiriirta mala-awaalkan iyo sidoo kale in laga fogaado wax kasta oo sun ah oo loo yaqaan 'cycloastragenol'.
Halkeen ka heli karnaa Cycloastragenol ugu fiican?
Well, budada cycloastragenol ee iibka ah waxaa si fudud looga heli karaa khadka tooska ah iyo dukaamada nafaqada ee kala duwan. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer cilmi baaris ku samee budada cycloastragenol si aad uga iibiso alaab-qeybiyeyaasha loo yaqaan 'cycloastragenol' la oggolaaday oo sumcad leh si loo hubiyo inaad heshid cycloastragenol aad loo nadiifiyey.
Budada Cycloastragenol waxaa loo muujiyey inay leedahay waxtar badan oo faa'iido leh iyo inbadan oo ka mid ah guryaha anti-gabowga cycloastragenol. Dhaqdhaqaaqa 'telomerase' ee loo yaqaan 'Cycloastragenol telomerase' waa habka ugu weyn ee waxqabadka kaas oo isna kordhiya telomere. Kuwan waxaa lagu soo bandhigay noocyo badan oo xayawaan ah iyo sidoo kale in yar invitro waxbarashada.
Tijaabooyinka caafimaad ee loo yaqaan 'cycloastragenol astragalus' oo laga soosaaray dheereynta telomere aad ayey uyartahay sidaa darteedna daraasado badan si loo bixiyo caddeyn adag ayaa loo baahan yahay.
Saamaynta ay leedahay TA-65 ee hagaajinta cilladda wadnaha ayaa ah mid aad u hooseysa maaddaama daraasado aad u xaddidan ay jiraan oo lagu taageerayo ficilkan TA-65.
Barashada dheef-shiid kiimikaadka 'cycloastragenol' ee faahfaahinta waxay sidoo kale ku fiicnaan doontaa xogta la heli karo iyo sidoo kale soo bandhigidda wixii sun ah ee loo yaqaan 'cycloastragenol' ee laga yaabo inay dhacdo sababtoo ah isku-uruurinta xad-dhaafka ah.
Daraasado dheeri ah oo lagu qiimeeyo waxtarka dheecaanka cycloastragenol ee faa'iidooyinka la sheegay. Saamaynta daawada cycloastragenol weli lama oga. Sidaa darteed, cilmi-baarista waa in lagu hagaajiyaa go'aaminta suurtagalnimada waxyeelada cycloastragenol iyo sidoo kale isdhexgalka daawooyinka kale.
Marka la fahmo faa'iidooyinka caafimaadka cycloastragenol, waxay kaa caawin doontaa sahaminta farsamooyinka salka ku haya tallaabooyinkan CAG.
Intaa waxaa dheer, qiyaasta ku habboon ee loo yaqaan 'cycloastragenol' waxay u baahan tahay daraasado dheeraad ah si loo qiimeeyo qiyaasta lagula taliyay kooxaha da 'kala duwan. Bixiyeyaasha kala duwan ee loo yaqaan 'cycloastragenol' ayaa qoray qiyaaso kala duwan oo ay tahay in la waafajiyo cilmi-baarista.
Yuan Yao iyo Maria Luz Fernandez (2017). "Saamaynta Faa'iidada leh ee Dhaqdhaqaaqa Telomerase (TA-65) ee ka dhanka ah Cudurka Joogtada ah". EC Nafaqada 6.5: 176-183.
Wang, J., Wu, M.-L., Cao, S.-P., Cai, H., Zhao, Z.-M., & Heesta, Y. -H. (2018). Cycloastragenol wuxuu wax ka tarayaa dhaawaca wadnaha ee tijaabada ah ee jiirka iyadoo la dhiirrigelinayo miyir-mareenka 'autophagy' iyadoo la adeegsanayo ka hortagga calaamadaha AKT1-RPS6KB1. Biomedicine & Farmotherapy, 107, 1074-1081. doi: 10.1016 / j.biopha.2018.08.016
Sun, C., Jiang, M., Zhang, L., Yang, J., Zhang, G., Du, B.,… Yao, J. (2017). Cycloastragenol wuxuu dhexdhexaadiyaa firfircoonida iyo xakamaynta kordhinta ee qaabka loo yaqaan 'lymphocyte pan-activation mouse' ee loo yaqaan 'connavalin A'. Immunopharmacology iyo Immunotoxicology, 39 (3), 131-139. doi: 10.1080 / 08923973.2017.1300170.
Ip F, C, F, Ng Y, P, An H, J, Dai Y, Pang H, H, Hu Y, Q, Chin A, C, Harley C, B, Wong Y, H, Ip N, Y: Cycloastragenol waa firfircoone telomerase firfircoon ee unugyada neerfayaasha: Saamaynta Maamulka Murugada. Neurosignals 2014; 22: 52-63. doi: 10.1159 / 000365290.
Yu, Yongjie & Zhou, Limin & Yang, Yajun & Liu, Yuyu. (2018). Cycloastragenol: Murashax riwaayad xiiso leh oo ku saabsan cudurrada la xiriira da'da (Dib u eegis). Daawada Tijaabada iyo Daaweynta. 16. 10.3892 / etm.2018.6501.
AADKA CYCLOASTRAGENOL (78574-94-4)
2.Waa maxay Cycloastragenol?
3.Farsamaynta Waxqabadka Cycloastragenol
5.Qiyaasta Heerka Cycloastragenol
6.S Cycloastragenol ma nabad qabaa?
7.Halkeen kaheli karnaa Cycloastragenol ugufiican?